नयाँ थ्यांक्सगिभिंग स्टफिंग रेसिपीहरू सेतो महलबाट मसालेदार
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » यदि यो तपाइँको प्रेस विज्ञप्ति हो भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्! » नयाँ थ्यांक्सगिभिंग स्टफिंग रेसिपीहरू सेतो महलबाट मसालेदार
ह्वाइट क्यासलले यस वर्ष थ्याङ्क्सगिभिङलाई दुईवटा नयाँ स्टफिङ रेसिपीहरू प्रदान गर्दैछ, जसमा एउटा मात्र ओन्ली फ्यानहरूमा अनावरण गरिएको छ। बेकन जालापेनो चीज स्लाइडर स्टफिंग र साउथवेस्ट जलापेनो चीज स्लाइडर स्टफिंग, व्हाइट क्यासलको मौलिक स्टफिंग रेसिपीमा भर्खरको भिन्नताहरू, पक्कै पनि कुनै पनि डिनर टेबलमा केही तातो थप्नेछ। यो थ्यांक्सगिभिङले सन् १९९१ मा पहिलो पटक स्टफिङ रेसिपी रिलिज भएको ३०औँ वार्षिकोत्सव मनाउँछ।
तिनीहरूको नामले संकेत गरेझैं, स्टफिंगका दुवै संस्करणहरूले व्हाइट क्यासलको मसालेदार जालापेनो चीज स्लाइडरलाई मुख्य सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्दछ।
ह्वाइट क्यासलका उपाध्यक्ष जेमी रिचर्डसनले भने, "विदाको मौसम एकदमै तातो हुन लागेको छ किनभने यी रेसिपीहरूले वास्तवमै गर्मीलाई प्याक गर्छ।" "हाम्रो Jalapeño चीज स्लाइडर हाम्रा रेस्टुरेन्टहरू र किराना फ्रीजर आइलहरूमा दुबैमा यस्तो लोकप्रिय वस्तु हो, त्यसैले हामीलाई थाहा छ हाम्रा क्रेभरहरू यी नयाँ तातो-र-मसालेदार स्टफिंग रेसिपीहरू मन पराउनेछन्।"
ह्वाइट क्यासलले फ्लोरिडा-आधारित फायर फाइटर र शेफसँग मिलेर नयाँ स्टफिंग रेसिपीहरूको बारेमा शब्द बाहिर निकाल्न मद्दत गरेको छ। ओर्लान्डो फायर डिपार्टमेन्टका जिल्ला प्रमुख र लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल व्यक्तित्व, म्यानी वाशिंगटन जूनियरले प्रशंसकहरूलाई कसरी बेकन जालापेनो चीज स्लाइडर स्टफिङ बनाउने भनेर देखाउनेछन्, जसमा क्रिस्पी बेकनका टुक्रा, टुक्रा जालापेनो मिर्च, अजवाइन, सिलेन्ट्रो, जीरा र टुक्राहरू समावेश छन्। काली मिर्च ज्याक चीज, सबै एकै प्रकारको तातो र मसालेदार स्वाद सिर्जना गर्न सँगै आउँदैछन्। उनको सामग्री व्हाइट क्यासलको यूट्यूब च्यानल र यसको फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम खाताहरूमा देखा पर्नेछ।
र यसको मसलादार पक्ष देखाउँदै, White Castle ले तातो र मसलादार दक्षिणपश्चिम Jalapeño Cheese Slider Stuffing लाई OnlyFans मा प्रस्तुत गर्दैछ, 180 मिलियन भन्दा बढी दर्ता प्रयोगकर्ताहरू र2मिलियन भन्दा बढी सिर्जनाकर्ताहरू विश्वव्यापी रूपमा सदस्यता-आधारित सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म। यो संस्करणले अतिरिक्त jalapeño र poblano peppers थपेर तापलाई अर्को स्तरमा लैजान्छ जबकि अझै पनि तपाइँलाई थाहा छ र मनपर्ने परम्परागत स्टफिंग स्वादहरू हाइलाइट गर्दछ। व्हाइट क्यासलका फ्यानहरूले ब्रान्डको नयाँ OnlyFans प्रोफाइलमा विशेष नुस्खा हेर्न सक्छन्।
"Jalapeño चीज स्लाइडर स्टफिंग को बेकन र दक्षिणपश्चिम संस्करण को बारे मा ठूलो कुरा यो हो कि तपाइँ कुनै एक लाई तपाइँ जस्तै तातो र मसालेदार बनाउन सक्नुहुन्छ," रिचर्डसनले भने। "यी थैंक्सगिभिङ र फ्रेन्ड्सगिभिङ सेलिब्रेशनका लागि साइड डिशहरू हुनुपर्छ।"
यी तातो, नयाँ स्टफिङ रेसिपीहरूको पूरकको रूपमा, व्हाइट क्यासलले यसको सीमित १०० औं जन्मदिन संस्करण "क्रेभे बोट" मा फायर सेल राख्दैछ। ह्वाइट क्यासलको हाउस अफ क्रेभ अनलाइन गिफ्ट स्टोरमा उपलब्ध छ, क्रेभे बोट ग्रेभी, फन्ड्यू, होल्यान्डाइज र अन्य क्रेभेबल ससहरूको लागि उपयुक्त छ। यो केवल $ 100 को लागी उपलब्ध छ।
थप रूपमा, व्हाइट क्यासलले थैंक्सगिभिङमा काम गर्ने सबै फायर फाइटरहरूलाई निःशुल्क क्यासल कम्बो #1-#6 वा निःशुल्क ब्रेकफास्ट कम्बो दिइरहेको छ। कुनै कुपन वा खरिद आवश्यक छैन, यद्यपि फायर फाइटरहरूलाई पहिचान देखाउन र दिउँसो भन्दा पहिले आइपुग्ने अनुरोध गरिएको छ किनकि धेरै रेस्टुरेन्टहरू छुट्टीको लागि चाँडै बन्द हुँदैछन्।
The Original Slider® Stuffing रेसिपीको ३०औँ वार्षिकोत्सवमा सजिलो तर स्वादिष्ट नयाँ स्टफिङ रेसिपीहरू आइपुग्छन्। रेसिपीको उत्पत्ति 30 मा भएको थियो, जब सेतो क्यासल टोलीका सदस्यले उनकी हजुरआमाको पारिवारिक स्टफिङ रेसिपीलाई स्लाइडरको बोराले बढायो। त्यसबेलादेखि, लोकप्रिय स्लाइडर-आधारित स्टफिंग केवल एक थ्यांक्सगिभिङ परम्परा मात्र होइन, तर अमेरिकाभरिका क्रेभर परिवारहरूका लागि वर्षभरिको खानामा स्वागत थपिएको छ।
2019 मा, परिवारको स्वामित्वमा रहेको फास्ट-फूड र उपभोक्ता प्याकेज गरिएका सामानहरू कम्पनीले शाकाहारी र शाकाहारीहरूलाई अपील गर्न यसको मूल स्लाइडर स्टफिङ रेसिपीको थोरै संशोधित संस्करण प्रस्तुत गर्‍यो। Impossible™ स्लाइडरलाई मुख्य सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्दै, White Castle Impossible™ स्लाइडर स्टफिङले मासु नखानेहरूलाई सबैले मन पराएको स्वादको आनन्द लिने अवसर दियो।
व्हाइट क्यासल क्रेभरहरूले राष्ट्रव्यापी किराना पसलहरूमा फ्रिजर खण्डमा मूल स्लाइडरहरू र जालापेनो चीज स्लाइडरहरू किन्न सक्छन्। मूल स्लाइडरहरू, Jalapeño चीज स्लाइडरहरू र असम्भव™ स्लाइडरहरू व्हाइट क्यासल रेस्टुरेन्टहरूमा किन्न सकिन्छ। भराई व्यञ्जनहरु तल प्रदान गरिएको छ। सेतो महल मेनु वस्तुहरू प्रयोग गरेर थप अद्वितीय नुस्खा विचारहरूको लागि, www.whitecastle.com/food/recipes मा जानुहोस्।
ह्वाइट क्यासलको बढ्दो विविधताका स्टफिंग रेसिपीहरूले विभिन्न प्रकारका क्रेभर स्वादहरूलाई अपील गर्नेछ। तीन भराई व्यञ्जनहरु तल सूचीबद्ध छन्। चौथो — र सबैभन्दा लोकप्रिय — रेसिपी अब White Castle को OnlyFansprofile मा उपलब्ध छ।
सेतो महल® बेकन जालापेनो चीज स्लाइडर स्टफिंग
तयारी समय: minutes मिनेट
पकाउने समय: 45 देखि 50 मिनेट
सेवाहरू:4देखि 6
1 सेतो क्यासल® Jalapeño चीज स्लाइडरहरू
2. 10 चम्मच मक्खन
3. 1 कप अजवाइन, काटिएको
4. 1 jalapeño काली मिर्च, बारीक काटिएको
5. 10 स्लाइस बेकन, पकाएको र काटिएको (लगभग 1¼ कप)
6. 1 चम्मच नुन
7. आधा चम्चा काली मिर्च
8. 1½ चम्मच जीरा
9. ¼ कप सिलिन्ट्रो, काटिएको
10. ¾ कप टर्की वा कुखुराको ब्रोथ
11.2अण्डा
12. 1 कप काटिएको काली मिर्च ज्याक चीज
1. मध्यम तातोमा ठूलो स्किलेटमा मक्खन पगाल्नुहोस्। diced अजवाइन र jalapeño काली मिर्च थप्नुहोस् र नरम नभएसम्म पकाउनुहोस्।
2. प्याकेज निर्देशन अनुसार तातो स्लाइडर। क्वार्टरमा काट्नुहोस्।
3. ठूलो मिक्सिङ कचौरा वा प्यानमा, काटिएको बेकन, नुन, काली मिर्च र जीरा संग चौथाई स्लाइडर मिलाउनुहोस्। सिलिन्ट्रो र स्किलेटबाट तरकारीहरू मिलाउनुहोस्। यदि टर्कीमा भराई पकाउँदै हुनुहुन्छ भने, यहाँ पनि काली मिर्च ज्याक चीज थप्नुहोस्।
4. एउटा सानो कटोरामा, शोरबा र अण्डा मिलाउनुहोस्। स्टफिङ मिश्रणमा हाल्नुहोस् र समान रूपमा वितरित नभएसम्म हलचल गर्नुहोस्।
5. स्टफिङ मिश्रणलाई 9×13 बेकिंग डिशमा राख्नुहोस् र माथि काली मिर्च ज्याक चीजको साथ राख्नुहोस्।
6. 350 डिग्रीमा 30 मिनेट ढाकिएको बेक गर्नुहोस्। त्यसपछि खोल्नुहोस् र 15 देखि 20 मिनेट बढी, माथि खैरो नभएसम्म पकाउन जारी राख्नुहोस्।
सेतो महल ® मूल स्लाइडर भराई नुस्खा
तयारी समय:5देखि 10 मिनेट
कुक समय: 35 मिनेट
सर्भरहरू: लगभग9कप भराई (10 देखि 12-पाउन्ड टर्कीको लागि पर्याप्त)
1. 10 देखि 12 सेतो महल मूल स्लाइडरहरू, कुनै अचार छैन (क्यासल रेस्टुरेन्ट वा स्थानीय खुद्रा विक्रेताबाट)
2. 1½ कप काटेको अजवाइन
3. 1¼ चम्चा ग्राउन्ड थाइम
4. 1½ चम्मच जमीन ऋषि
5. ¾ चम्चा मोटो कालो मिर्च
6. ¼ कप चिकन ब्रोथ (वा क्यासरोल संस्करणको लागि 1 कप)
1. स्लाइडरहरूलाई काट्ने आकारको टुक्राहरूमा च्यात्नुहोस् र ठूलो मिक्सिङ कचौरामा राख्नुहोस्।
2. diced अजवाइन र seasonings थप्नुहोस्।
3. ¼ कप चिकन ब्रोथ थप्नुहोस् र राम्रोसँग टस गर्नुहोस्।
4. टर्कीको गुहामा स्टफिङ राख्नुहोस् र तपाईले सामान्य रूपमा पकाउनुहोस्।
5. यदि स्टफिङलाई क्यासरोलको रूपमा पकाउँदै हुनुहुन्छ भने, थप ¾ कप चिकन ब्रोथ थप्नुहोस् र राम्रोसँग टस गर्नुहोस्।
6. 2-क्वार्ट क्यासरोल डिशमा स्प्रे वा तेल लगाउनुहोस्।
7. स्टफिङ क्यासरोल डिशमा स्थानान्तरण गर्नुहोस् र 350 मिनेटको लागि 35 डिग्रीमा बेक गर्नुहोस्।
White Castle® Impossible™ स्लाइडर स्टफिङ
सर्भरहरू: लगभग9कप भराई
1. 10 White Castle® Impossible™ स्लाइडरहरू, कुनै अचार छैन
6. 1 कप तरकारी शोरबा
1. असम्भव™ स्लाइडरहरूलाई काट्ने आकारको टुक्राहरूमा फाल्नुहोस् र ठूलो मिक्सिङ कचौरामा राख्नुहोस्।
3. 1 कप तरकारी शोरबा थप्नुहोस् र राम्रोसँग टस गर्नुहोस्; अवयवहरूलाई अवशोषित गर्न 10 मिनेटको लागि बस्न दिनुहोस्।
4. 2-क्वार्ट क्यासरोल डिशमा स्प्रे वा तेल लगाउनुहोस्।
5. स्टफिङ क्यासरोल डिशमा स्थानान्तरण गर्नुहोस् र 350 मिनेटको लागि 35 डिग्रीमा बेक गर्नुहोस्।